Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. माघे संक्रान्ति : तरुलको मूल्य बृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा – Emountain TV
माघे संक्रान्ति : तरुलको मूल्य बृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा
काठमाडौं, ३० पुस । माघी अर्थात मकर संक्रान्तिमा तरुलको विशेष महत्व छ । मकर संक्रान्तिका दिन पारिवारिक सदस्य, आफन्त तथा साथीभाई सँगै बसेर अघिल्लो दिन पकाइएको तरुल, चाकु, तिलको लड्डु तथा घिउ खाने चलन छ । मकर संक्रान्तिका बेला यी खाद्यबस्तुको माघ बढी हुन्छ । माग बढेसँगै तरुलको मूल्यमा बृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
मकर संक्रान्ति थारु र मगर समुदायको विशेष चाड हो । माघे संक्रान्ति, मकर संक्रान्ति, माघी लगायत विभिन्न रुपमा मानाइने यस पर्व हरेक जाती तथा समुदायले आ–आफ्नै तरिकाले मनाउँछन् । पहाडी क्षेत्रमा पने मकर संक्रान्तिका अवसरमा तरुल, घिउ, चाकु तथा तिलको लड्डु खाएर आपसमा खुसी साटासाट गरेर मनाइन्छ । मकर संक्रान्तिको अवसरमा यी खाद्य वस्तुको खपत पनि बढी हुन्छ । माग बढेपछि व्यापारीहरुले मनोमानी मूल्य असुल्दा उपभोक्ता भने समस्यामा परेका छन् ।
काठमाडौंमा नवलपरासी, चितवन, धादिङ, पाल्पा, सर्लाही, धरान, सुनसरीलगायतका जिल्लाबाट तरुलको आयात हुने गरेको छ । मकर संक्रान्तिलाई लक्षित गरी दैनिक ८० देखि १ सय टनसम्म तरुल आयत भइरहेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले जनाएको छ ।
बजारमा हात्तीपाइले तरुल, बन तरुल, सेतो तरुल, रातो तरुल, घर तरुल, पानी तरुल, जस्ता विभिन्न किसिमका तरुलहरु पाइन्छ । ती तरुलहरुको मुल्य पनि बजारमा फरक–फरक छ । बजारमा बनतरुलको मुल्य प्रतिकेजी २ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँसम्म छ त्यस्तै पातले सेतो तरुल र मुढेको सेतो तरुलको मुल्य ५० देखि ७० रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ ।
विगत वर्षको तुलनामा यो वर्ष तरुलको मुल्य पनि वृद्धि भएको व्यवसायी बताउँछन् । मूल्य वृद्धि हुँदा विक्रि घटेको उनीहरुको भनाइ छ । माघी पर्वको अवसरमा तरुल, सिमल तरुल, सखरखण्ड, पिडालु, जस्ता परिकारहरु घर–घरमा पकाइन्छ । बजारमा अघिपछि विरलै किन्न र देख्न पाइने तरुल माघे संक्रान्तिको आसपासमा भने प्रसस्तै पाइन्छ । जाडो समयमा यस्ता कन्दमुल खाँदा गर्मी हुन्छ र जाडो छल्ने उर्जा मिल्ने विश्वास रहेको छ ।
पतन्जलीको घ्यूको कारण नेपाली घ्यू विक्रि भएन
‘आइसिपीबाट सामान आयात-निर्यात गर्न खर्चिलो र झन्झटिलो’